यिनै हुन् दुई दिदिबहिनि जसलाई तीज काल बनेर आयो ! – Purba Aawaj
यिनै हुन् दुई दिदिबहिनि जसलाई तीज काल बनेर आयो !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र १७, २०७८ समय: २०:०५:०३
काठमाडौं । दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि पुल निर्माणको काम कत्ति पनि अघि बढेन । फलस्वरुप बुधबार राति निकै दुःखद घटना भयो ।
दाङमा सिस्नेखोलामा आएको बाढीले जीप बगाउँदा चारजनाको मृ’त्यु भएको छ । घोराही-लमही सडक खण्डको घोराही उपमहानगरपालिका–४ स्थित सिस्नेखोलामा आएको बाढीले बुधबार राति १० बजे जीप बगाउँदा ४ जनाको ज्यान गएको हो । मृ’त्यु हुनेमा एकै घरमा दुई दिदीबहिनीसहित चारजना रहेका हुन् ।
तिजका सामग्री किनमेल गर्ने भनी चालकसहित पाँचजना कार रिजर्भ गरेर भारतको रुपैडिहा गएका थिए । सामान किन्दा–किन्दा रुपैडिहाबाट फर्किने क्रममा रात परिसकेको थियो । राति १० बजे सिस्नेखोला पुगे । महिलाहरूको महान् पर्वका रूपमा लिइने तिज मनाउन सामान ल्याएर फर्किँदै थिए । तर, उनीहरूको तिज मनाउने सपना चकनाचुर पार्‍याे ‘सिस्नेखोलाले ।’
त्यो दिन खोला ठूलो आएको थियो । ठूला सवारीसाधनहरू आवतजावत गर्न सक्ने भए पनि साना सवारीसाधनहरू आवतजावत गर्न सक्ने अनस्था थिएन । अन्ततः कार पनि बग्यो । चालक हाम फालेर बाँच्न सफल भए । तर, अन्य चार महिलाको मृ’त्यु भयो । मृत्यु हुनेमा दुईजना एकै घरका हुन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका– १३ निवासी ३२ वर्षीया सुशीला श्रेष्ठ र घोराही– १४ निवासी ३० वर्षीया राधा श्रेष्ठ दुई बहिनी हुन् । उनीहरू घोराही उपमहानगरपालिका– १६ का वडा सदस्य जगत श्रेष्ठका छोरीहरू हुन् ।
उनका दुईजना मात्रै छोरी थिए । उनीहरू दुवैजनाको बिहे भइसकेको थियो । जेठी छोरी सुशीलाका सन्तान छैनन्, तर कान्छी छोरी राधाको १२ वर्षको एउटा छोरा छन ।
साभार- ताजा खबर
Last Updated on: September 2nd, 2021 at 8:05 pm
७७२ पटक हेरिएको